Maamulka Jubba oo u jawaabay SADE - Caasimada Online
Home Warar Maamulka Jubba oo u jawaabay SADE
Maamulka Jubba oo u jawaabay SADE
Kismaayo (Caasimada Online) – Maamulka KMG ah ee Jubba ayaa markii ugu horaysay ka hadlay eedaymo ay dhawaan u jeediyeen qaar kamid ah waxgaradka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda beesha Sade ee ku dhaqan deeganada Jubbooyinka iyo Gedo.
Beesha Sade, ayaa maamulkaasi ku eedeysay in dadka shacabka ah ee beesha kasoo jeeda ee dega Kismaayo lagu hayo barakicin iyo dilal qorsheysay oo ay fulinayaan maleeshiyada Raaskambooni.
Xasan Daahir Afrax Xeer oo illaaliyaha Maamulka Jubba, ayaaa sheegay in dad laga saaray guryo ay leeyihiin inaysan jirin, isla markaana Maamulka Jubba uu dhowr meelood ka saaray dad shacab ah oo daganaa guryaha dowladda oo sida uu hadalka u dhigay uu u baahday maamulku.
“Ma jirto cid si gaaar ah loo bartilmaameedsanayo, oo la barakicinayo” ayuu yiri
Waxa kale oo uu ka hadlay xaalada guud ee deeganada Jubbooyinka isagoo dhinaca kale sheegay amniga degmada Kismaayo inuu yahay mid dagan oo aysan jirin wax dhibaatooyin ah oo muddooyinkaan ka dhacay Kismaayo.
Waxaa sidoo kale wax laga weydiiyey hoobiyayaal la sheegay in lagu garaacay meelo ka mid ah magaalada Kismaayo, oo wareysiga uu ku billaabay, kadibna wuxuu ka hadlaa eedeymaha beesha Sade.